MACLUUMAADKA TILMAAMAHA EREYGA GAABAN EE JARMAL GAABAN IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Tilmaamaha Ereyga Gaaban ee Jarmal Gaaban iyo Sawirro
'Tani waa Tilmaame-yaasha Jarmal ee Gaaban, Fritz. Isagu waa 2 jir waana eeyga noogu habboon. Fritz waa mid daacad ah, adeecsan, xushmad badan oo firfircoon! Heerka sare ee maalinta Fritz waa muddo dheer waxaan qaadanaa galab walba. Wuxuu leeyahay cunno xumo weligiisna ma diido cunnada. Fritz wuxuu kuqoran yahay tababarka agility-ka wuxuuna jecel yahay inuu wado koorsada caqabada. Tayada ugu fiican Fritz waa ixtiraamkiisa maamulka. Waxaan si fudud ugu sheegi karnaa waxa lagu sameeyo cod jilicsan, deggan, wuuna ku sameyn doonaa isagoo faraxsan. Wuxuu ogyahay soohdimihiisa marwalbana wuxuu sameeyaa intii karaankiisa ah inuu naga farxiyo.
Liistada eeyaha Gawaarida Gawaarida Gaaban ee Jarmalka
Jarmal Timo Gaaban oo Jarmal ah
jur-muh n shawrt-timo jilicsan poin-ter
Tilmaamaha Gaaban ee Jarmalku waa gundog ujeeddo leh oo dhan. Madaxa waa u dhigmo jirka. Qalfoofku waxyar buu wareegsan yahay, ballaadhkiisuna waa dhinacyadiisa. Dhererka muuska waa inuu la mid yahay dhererka dhakada. Afka ayaa ku dheereeya oo leh joogsi yar oo dhinaca laga daawan karo. Sanka weyn waa bunni leh dulal ballaaran oo furan. Indhaha u eg-yicibta, indhaha dhexdhexaadka ah waa bunni madow. Dhegaha sare waa kuwo ballaadhan, oo u dhow madaxa. Ilkaha waa inay ku kulmaan qaniinyada maqas. Laabta ayaa qoto dheer. Dabada ayaa ku xidhan illaa 40% dhererkeeda. Fiiro gaar ah: dabo istaaggu waa sharci darro inta badan Yurub. Cagaha is haysta waa la maroojin. Baaqyada ku saabsan cagaha hore waa laga saari karaa. Maqaarku wuu adag yahay. Dharka gaaban waa mid qaro weyn oo taabasho leh. Way ka yara dheereysaa dhinaca hoose ee dabada iyo cirifka dambe ee miskaha, waana ka jilicsan tahay, ka gaaban tahay, kuna dhumineysaa madaxa iyo dhegaha. Midabada koofiyadda waxaa ka mid ah beerka adag, beerka iyo caddaanka, beerka la calaamadiyey ama balastarro, calaamadda cad ama roan beerka.
Mid ka mid ah taranka ugu firfircoon, Tilmaamaha Gaaban ee Jarmalka waa a eey ugaarsiga dabiiciyan . Difaac, xariifnimo, xamaasad iyo diyaar u ah inuu ku farxo, waxay aad u jeceshahay qoyskeeda aadanaha. Happy-go-nasiib, wax kale ma jecla in ka badan nooc ka mid ah waxqabad wax ku ool ah oo lala yeesho milkiilayaasheeda sida a socod dheer, orod , socod, ugaarsi, ama ciyaar Frisbee ah. Noocani kuma haboona nolosha qolleyda. Aamin, niyad iyo saaxiibtinimo, waxay jeceshahay oo si wanaagsan ugu dhex jirtaa carruurta. Xukunka iyo heerarka tamarta wax yar ayey ku kala duwan yihiin eey yar ilaa eey xitaa isla qashin isku mid ah, si kastaba ha noqotee kuwa loo soocay inay ka shaqeeyaan tartamada waxqabadka sare waxay badanaa u baahan yihiin waxqabad ka badan celceliska Shorthair, laakiin dhammaantood weli waa eeyo aad u sarreeya oo u baahan in badan jimicsi maalinle ah . Ku habboon qoys firfircoon. Markay jimicsi la’aan yeeshaan waxay noqon karaan kuwo kacsan oo niyad jabsan. GSP ma dhagaysan doonto haddii ay dareento inay ka maskax adag tahay milkiilaheeda, hase yeeshe sidoo kale sifiican ugama jawaabi doonto anshaxa adag. GSP waxay ubaahantahay milkiile soo bandhiga a hawada dabiiciga ah ee maamulka bixinta adag, laakiin deggan, kalsooni leh oo waafaqsan xeerarka waa in loo sameeyaa si loo raaco. GSP amar damac iyo baahi qaab dhismeedka nolosheeda . Haddii noocani ka maqnaado jimicsi ama hoggaamin midkood waxay ku horumarin kartaa welwelka kala-tagga waxayna suurtagal noqon kartaa wax duminaya oo kacsan. Si hagaagsan oo hagaagsan, GSP maskax deggan oo helaya dhaqdhaqaaq maskaxeed iyo jireed oo ku filan oo ay weheliso isku dheelitirnaan hoggaamineed oo isdaba joog ah ayaa la jaan qaadi doona eeyo kale iyo bisadaha . Noocani wuxuu jecel yahay inuu ciyo waxaana lagu keydin karaa shisheeyaha. Bulsho wanaagsan . Waxay ku jiri doonaan sharaftooda haddii dhab ahaantii loo isticmaalo wixii loo soocay oo lagu qaaday safarada ugaarsiga.
Dhererka: Ragga 23 - 25 inji (59 - 64 cm) Dumarka 21 - 23 inji (53 - 58 cm)
Miisaanka: Ragga 55 - 70 rodol (25 - 32 kg) Dumarka 45 - 60 rodol (20 - 27 kg)
Badanaa nooc caafimaad leh laakiin qaar baa u nugul suuxdin, sinta dysplasia, hermaphrodism iyo lymphedema. Qaar ka mid ah walaacyada yar yar waa CHD, gelitaanka, torsion gastric, VWD, pannus, OCD. U janjeera burooyinka unugyada .
Noocani laguma talinayo nolosha guriga oo wuxuu ku fiican yahay daarad ballaaran iyo qoys firfircoon, isboorti leh. Waxay awoodi kartaa inay ka booddo xayndaab kasta oo dhererkiisu ka yar yahay 6 fuudh. Hoosta jimicsiga, GSP caajis ayaa ah farshaxanno baxsad weyn.
Jimicsiga ayaa ahmiyad weyn u leh xayawaanadan aan daalka lahayn, ee tamarta badan. Waxay ka badan yihiin ciyaar xitaa qoyska ugu firfircoon mana loo qaadan karo inay yihiin xayawaano qoys ilaa ay ka damaanad qaadi karaan jimicsi xoog leh. Waxay u baahan yihiin in la qaato maalin kasta, kacsan, socod dheer , orod ama ku garabsoco markaad baaskiil wado. Haddii jimicsi yar la sameeyo, noocani wuxuu noqon karaa mid aan xasilloonayn oo wax burburinaya.
Ilaa 7 ilaa 12 eey
Jaakadda siman ee Tilmaame-yaasha ayaa aad u fudud in la xannaaneeyo. Kaliya si joogto ah ugu caday burush adag oo nadiif ah oo maydha markii loo baahdo oo keliya. Is xoqin leh gabal shukumaan ah ama chamois ayaa ka tagi doona jaakadda dhalaalaysa. Sidoo kale fiiri cagaha, gaar ahaan ka dib marka eey jimicsi sameyso ama shaqeyneyso. Si fiican u qalaji eeyga ka dib ugaarsiga si looga hortago qarqowga. Baadh dhagaha si joogto ah. Noocani waa celcelis daadiya.
In kasta oo aan la caddayn, qaar waxay u malaynayaan in tilmaamaha Gaaban ee Jarmalku yahay farac ka mid ah noocyada kala duwan ee ugaarsiga Jarmalka, shimbiraha urta, raadadka iyo eeyaha raadraaca, sida Tilmaamihii Hore ee Isbaanishka , Ey Jarmal Shimbir, Hounds of St. Hubert (Noocyada dhiig-baxa) , iyo Foxhound . Mar dambe ayaa Tilmaame Ingiriis ayaa loo tallaabay si loogu daro xawaare iyo adkaysi. Ugaarsadayaasha Jarmalku waxay daba socdeen eey ujeedo leh oo dhan oo aan kaliya laheyn san wanaagsan, laakiin tilmaami kara, raadraaci kara, wuxuu ahaa dib udhac heer sare ah iyo gundog, labadaba garoonka iyo biyaha baal iyo dhogor labadaba. Waxay sidoo kale doonayeen eey ah ugaarsi ugaarsade dhammaadka wiigga ah, laakiin wuxuu yeeshay wehel wanaagsan oo qoyska ilaaliya. Tilmaamaha Gaaban ee Jarmalku AKC ayaa aqoonsaday 1930. Tilmaamaha Gaaban ee Jarmalku wuxuu gacan ka gaystay horumarinta Tilmaamaha Tilmaamaha Jarmalka . Awoodaha Tilmaamaha Gaaban ee Jarmalka waa muuji eey, adeecid, gundog, dib u soo helid, raadinta tijaabooyin, tijaabooyin duurjoog ah iyo tijaabooyin ugaarsi ah.
Yukon GSP sidii eey yar oo ah 8 toddobaad jir
Sammy Tilmaame Jarmal Gaaban oo Jarmal ah oo 12 jir ah oo tilmaamaya— Inkasta oo uu da 'yar yahay haddana Sammy wali waa buuxa tamar.'
Vik Tilmaamaha Gaaban ee Jarmal ee 2 sano jir ah— 'Vik waa weheliye firfircoon oo firfircoon waana ciyaartoy fudud. UU UU JECEL YAHAY ugaarsiga! Ma jiraan wax ka hor istaagaya inuu gaaro himilooyinkiisa. Isagu waa mid aad u dadaal badan isla markaana aad u kulul dhammaan waxqabadyadiisa. Wuxuu ku quustaa biyaha dhammaan xamaasadiisa ... duurka, sidoo kale! Laakiin dhamaadka maalinta, kaliya wuxuu doonayaa sariirtiisa gudaha inuu ku raaxeysto qoyska. '
Vik Tilmaamaha Gawaarida Gaaban ee Jarmalka ee 2 sano jir ah oo ka boodaya dekedda biyaha
'Pointer-keena Jarmal ee Shorthair Sadie wuxuu qayb weyn ka ahaa qoyskeena. Waxaa halkaan lagu muujiyay iyada oo 2 sano jir ah. Markaan wadayaasha u aadno waxay raacdaa (eeyga ugu fiican safarka). Waxay jeceshahay inay sasabato ugaarsi ... Daqiiqad waxaan diyaarinay qoryaha iyadu albaabka ayey fadhidaa iyadoo sugeysa. Waxay jeceshahay socodkeeda, waxay soo qaadataa kubbado (waxay isku dayeysaa inay 3 kubbadood oo tennis ah ku hesho afkeeda). Waxay kaloo fiidmeerta ku garaacdaa kubbadda tennis-ka ee dabaqa sida bisadda oo kale. Waxaan u qaadnaa dalka gudihiisa socod dheer . Tani waa sharafteeda iyo farxaddeeda. Waxay jeceshahay inay tilmaamto shimbiraha, cayayaanka iyo wax kasta oo iyada ka yar. Waxay jeceshahay inay annaga isku soo duuduubto buste ... okay way hallawday. Laakiin iyadu waa hubaal inay ogtahay in iyada la jecel yahay. Waxaan ku sameeyaa xannaano-maalmeed gurigeyga. Dhammaan carruurtu way jecel yihiin iyada mana sugi karto inta ay maalin walba imaanayaan! '
'Kani waa 6.5-usbuuc jir Jarmal ah oo Shorthaired Pointer yar yar oo Hudson ah inta uu ku maqnaa jimicsiga iyo 'helitaanka' baalal Farxad leh in aan dhigay cawska. Wuxuu lahaa qarax wuxuuna jeclaa inuu ku dhex maro cowska dhaadheer.
Sadie oo ah Jarmalka Shorthair Pointer eey qiyaastii 4 bilood jir ah
Redi Turkio Oaze, 2 jir
'Kani waa sawirka Poketer-kayga gaaban ee Jarmalka Sasami. 10 bilood ayey ku jirtaa sawirkan. Sasami waa eey jecel, goofy jecel oo ordaya oo ciyaaraya. Waxay jeceshahay cayrinta shimbiraha, oo ay ku sameyneysay sawirkan, laakiin marar dhif ah ayay ku ciirtaa. Iyadu waa eey aad u saaxiibtinimo badan oo soo baxa. Waxay jeceshahay inay la ciyaarto wiilasheyda 2, Brandon iyo Kane. Farxad ma leh inay dadkeeda la joogto mooyee. Marnaba ma korin oo waxay jeceshahay inay noqoto bartamaha dareenka. Ahaanshaha taageere Cesar Millan, waan fahmay muhiimadda ay leedahay jimicsi maalinle ah eeyaha tamarta badan waxaanan hubiyaa in Sasami uu jimicsi badan helo maalin kasta. '
'Abby waa 3 bilood jir sawirka, wuxuuna noqday wax ku soo kordhay qoyskeena. Iyadu waa eey aad u jecel waxayna ku raaxeysataa inay waqtigeeda oo dhan la qaadato qoyska. Waxay jeceshahay inay soo ceshato kubbadaha waana la joogaa loo tababaray ugaarsiga . Abby wuxuu leeyahay tamar badan wuxuuna ubaahanyahay uguyaraan hal socod oo wanaagsan maalintii . Waxaan jeclaan lahayn inaan u helno shandad ay xirato inta ay socoto si ay u hesho jimicsi badan oo xoogaa tamar ah uga baxdo inta ay socoto. Wey heysataa bartay sida loo fariisto dawooyinka waana sanduuq tababaran . Calaamadeynta ayaa ah waxa ugu quruxda badan. Dhegaheeda aad bay u jilicsan yihiin waxayna kugu eegaysaa indhahaas bunni ee indha sarcaadka leh si ay qalbigaaga u xado. Wiilkeyga Cole, oo 13 jir ah, wuxuu Abby u doortay wehel iyo eey ugaarsi ah. Waxay leeyihiin dammaanad lagu sifeyn karo oo kaliya ' ninka saaxiibkiisa ugu fiican . ''
Cali, Tilmaamaha Gaaban ee Jarmalka oo ah eey yar 8 toddobaad oo ku dhow inuu seexdo
Eeg tusaalooyin badan oo tilmaame Gaaban oo Jarmal ah
Sawirada Tilmaamaha Gaaban ee Jarmalka 1
Eyda Tilmaamaha: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
waa maxay chorkie puppy
sheybaarka iyo chihuahua eeyo isku dhafan
yorkie iyo shih tzu eeyo
silig timo leh dachshund jack russell terrier mix
shukulaatada shukulaatada iyo isku darka cidhibta buluugga ah